« Tokony hofongorana » -
AccueilTresaka« Tokony hofongorana »
« Tokony hofongorana »
12/03/2018 admintriatra Tresaka 0
Vao niandoha ny taona ary hatramin’izao volana marsa izao, dia tsy nety lefy mihitsy ny halatra batterie ana fiara. Saika ahenoana izany avokoa ny faritra rehetra eto an-drenivohitra ny eny 67 ha, ny eny Sabotsy Namehana, ny eny Ankadifotsy , ny eny Alasora , Ankadimbahoaka hatraiza hatraiza….Gaga mihitsy ireo tompona fiara, fa hain’izy ireo ny mamoha ny fiaranao tsy haneno. Misy mantsy ny efa mametraka anjomara mba ho fanairana raha sendran’ny vaky fiara, saingy hain’izy ireo ny tsy mampaneno ny “antivol”. Ny mahagaga ihany koa, dia na misy aza sanatrian’izany entana hafa ambonimbony vidy noho ny batterie tavela any anaty fiara, dia tsy halain’izy ireo.
Tsy ho andian’olona iray aloha no hamaky fiara eny Ankadimbahoaka sy eny Sabotsy Namehana amin’ny andro iray. Efa tena misandrahaka mihitsy araka izany ny tambazotra mpangalatra batterie, ka atahorana mihitsy aza ho lasa anton’asan’ny tanora raha tsy misy ny fandraisana fepetra.
Mahazo antoka ireo mpanao ratsy arakaizany, fa na aiza izy no mangalatra na aiza dia vitany foana ny mamadika iny batterie iny ho vola. Aiza tokoa moa no tsy hahazo vahana ity asa ratsy ity raha mahita ny hamaroan’ireny tanora mitety fiara manontany batterie maty hovidiana ireny. Tsy misalasala mihitsy izy ireo manantona ny tompona fiara, ary manontany sao misy batterie maty hovidiana.
Mety ho tsotsotra ny handraisan’ny rehetra ny fanontaniany, saingy ny ao ambadik’ilay asa mihitsy toa manome vahana ny mpamaky fiara sy ny asan-jiolahy voarindra tsara.
Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra manokana mihitsy io bizna batterie io, satria dia asa miteraka asan-jiolahy tsotra izao. Na ireny mpivarotra batterie efa niasa toa ny eny Ambatoroka ireny aza tokony handraisana fepetra. Matoa mahazo vahana ilay fitadiavana batterie maty dia manome toky koa izany ny mpividy azy. Ka raha tiana hofongorana ny firongatry ny halatra batterie eto amintsika dia tokony hofongorana hatramin’ny mpividy sy ny mpanera azy ihany koa.
Tontolon’ny Asam-panjakana 2017 : Nahatratra 17 000 ny mpiasam-panjakana matotoa voasivana
Isan’ireo ministera manana andraikitra lehibe eo amin’ny fampandrosoana ny tontolon’ny Asam-panjakana eto Madagasikara ny ministeran’ny Asam-panjakana, asa ary ny lalàna sosialy. Ankoatra ireo fandraisana fepetra momba ny diplaoma hosoka, isan’ny nisongadina ihany koa ny fanafoanana ...Tohiny
Fanarenana ny Air Madagascar : Vita ny fifanaovan-tsonia tamin’ny Air Austral
Hery Rajaonarimampianina : « Firenena masi-mandidy i Madagasikara »
Hery Rajaonarimampianina : Olon’ny fihavanana
Hery Rajaonarimampianina : Nanotrona ny fandevenana ny filoha teo aloha Zafy Albert